KAOMININA TALATAMATY Hidina hitety tokantrano, hanasazy ireo maloto
Minisitry ny fahasalamana “Andao hamafisina ny fepetra”
Azo lazaina ho mety ny paikady notarihin’ny filohan’ny repoblika sy ny praiminisitra, hoy ny minisitry ny fahasalamana, ny Pr Hanitrala Jean Louis Rakotovao.
Fanasan-tanana amin’ny savony Misoroka aretina am-polony
Misoroka aretina am-polony ny fanasan-tanana amin’ny savony. Anisan’izany ny aretim-pivalalana, ny aretin’ny taovam-pisefoana, ny aretina coronavirus izay tena malaza tokoa amin’izao….
Fitsaboana Tsy re intsony ny Gélule CVO+
Tamin’ny 2 oktobra lasa teo no nitokanana ny ozinina mpamokatra fanafody Pharmalagasy eny Tanjombato. Hamokatra karazana fanafody 13 isa ao anatin’ny telo taona ny fanambin’ny fitondram-panjakana, fa ny gélule CVO+ no nisantarana izany.
Morafenobe Mandravarava sy mamono ny tazomoka
Mirongatra izay tsy izy ny aretina tazomoka manerana ny Distrikan’i Morafenobe efa ho tao anatin’ny telo herinandro, araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana.
Fahasalamana ara-panananahana Mila beazina ny ray aman-dreny sy ny zaza
Matetika no fanolanana vehivavy na ankizivavy kely foana no voaresaka, fa nefa tena misy eto amintsika sy manomboka mahazo vahana ihany koa ny fanolanana zazalahikely tao anatin'ny taona vitsivitsy.
Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka Nahazo fitaovam-pitsaboana mitentina 300.000 dolara
Miezaka hatrany ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka manatsara sy mampiroborobo ny fahasalaman’ny Reny sy ny zaza eto amintsika. Anisan’ny
EPP sy CEG manara-penitra Nohadihadiana arak’asa ireo te ho Tale 50 isa
Notanterahana tetsy amin’ny CEG Analamahitsy ny tafatafa na ny « entretien d’embauche » na fanadihadiana arak’asa ho an’ireo talen-tsekoly sy mpampianatra isan’ambaratongany hiasa eny anivon’ny EPP sy CEG
Tena kapok’Andriamanitra ity aretina pesta miseho eto amintsika ity hoy ny Ben’ny tanànan’ny kaominina Talatamaty Rado Razafindratsimba.
Raha tsy misy trangan-javatra tahaka izao mantsy dia tsy ho tonga saina hihetsika amin’ny asa fanadiovana mihitsy ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana, hoy izy. Ho an’ny kaominina iadidiany manokana dia fantatra fa hanomboka hidina hitety tokantrano izy ireo ka hisy mihitsy ny fanasaziana ireo maloto. Hiarahana amin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny ny hetsika ho fiarovana sy ho fitandroana ny aim-bahoaka. Anisan’ny kaominina nahitana trangan’aretina pesta tao amin’ity kaominina ity. Olona avy any amin’ny faritany no nitondra azy saingy efa voafehy tanteraka ankehitriny.